Kakuu Maammee: Dhadhaa barmeela tokkkoofi baaduu barmeela lama fixe - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Maammitu Makuriyaa
Goodayyaa suuraa Cumboo dhadhaa barmeela tokkoo fi baaduu barmeela lamaan hojjetame
Haati qabeenyaa mana nyaataa Kakuu Maammee, sagantaa eebba OMN damee Finfinnee fi Simannaa Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad galma barkumeetti qophaa'e irratti Cumboo meetira 15 dheerata jedhame dhiyeesaniiru.
Cumboon kun dhadhaa barmeela gabaabaa tokko guutuu fi baaduu barmeela gurguddaa lama qarshii 45, 000'n bitame fixuu BBC News Afaan Oromootti himaniiru.
Cumboon kuniis pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa, keessumaa kabajaa guyyichaa obbo Jawaar Mohaammad, Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi qondaaltoota olaanoo biroon murameera.
Image copyright Gammadaa Olaanaa
Goodayyaa suuraa Cumboo simannaa Jawaariifi eebbaa OMN'f qophaa'e keessumoonni kabajaa eebbisaniiru
''Nyaanni aadaa Oromoo akka beekamu waaniin barabaaduuf waltajjii kana irratti osoo Cumboo dhiyeessinee muraafus ni tola, miidhagaadhas jedhee waanan yaadeefin qopheesse,'' jedhu aadde Maammituun.
''Xaafii diimaa, mi'eessituuwwan garaagaraa, qocqocaa, baaduu fi dhadhaarraa akka urgaa'aan isaa mi'aayina isaa ibsutti hojjetame.''
Cumboo kanarratti Odaan qocqocaan bocame kan kaafame yoo ta'u barreefamni OMN fi ''anaa dhufu gootakoo'' jedhu barraa'ee jira.
Akka aadde Maammituun jedhanitti osoo namni hundi nyaatni aadaa Oromoo maal akka inni of keessaa qabu baree nyaata Oromoo malee hin nyaatu.
Nyaanni aadaa Oromoo waan ''foorjidii ta'e hin qabu waan hundi isaa waan uumamaati, qulqulluudhas'' jetti.
Baaduu isaa duwwaan qarshii 45, 000'n bitamuu kan dubbattu Maammituun, baasii hangam Cumboo kana hojjechuuf akka baaste shallagdee kan hin beekne ta'uu himteetti.
Keessumoota 2,500 oliif laaqana akka dhiheessitu gaafatamtee waliigaltee saniin keessumoota kabajaaf laaqana dhiyeessuus himteetti.
Cumboo kana jijjiirama ta'aa jirutti gammaduun akkasumas nyaata aadaa Oromoo beeksisuuf fedha qabduun kanfaltii malee qopheesite.
Galma barkumeetti nyaanni kun hin galu jedhamee mormii guddaa booda miseensonni Poolisii Federaalaa Oromoo ta'aniin akka ol seenu ta'uus dubbataniiru.
''Kan kaleessa walitti hin haasofne walitti dhufanii tokko ta'anii mul'atan baayyee namatti tola. kaleesssa gammachuu guddaarra oolle'' jechuunis miira waltajjii kaleessaarra tures aadde Maammituun dubbataniiru.
''Aadaan Oromoo tokkoon tokkoon isaa akka beekamu, Oromoon eenyu akka ta'e addunyaan akka beekun barbaadas'' jedhu.
''Nyaataan eenyuyyuu Oromoon akka hin qixxaanne addunyaan akka beekun barbaada. hundu irratti haa hojjetu'' jechuunis dhaamaniiru.
Aadde Maammiteen Oromoota naannoo somaalee keessaa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaa'n kumoota dhibbaan lakkaawaman finfinnee dha biddeenaa fi ittoo fe'anii nyaachisaa turan.
Haadholii dahanii kaampii turanis marqaa nyaachisanii dhadhaa dibaniis turan.